free music gụgharia ngwa
Download free music si nkwanye na saịtị na TunesGo
Spotify bụ otu n'ime n'elu ngwa ọdịnala n'ihi music gụgharia, ọ na-enye gị na-akparaghị ókè ohere na gụgharia ókè a dịgasị iche iche nke ọdịyo egwu, Genres, listi ọkpụkpọ, albums na nka. Ọ bụ ezie na mot free, atụmatụ na-n'aka aga-eme ka ị na-azọpụta a otutu. Ebe a bụ ụfọdụ ihe si Spotify ọrụ;
Nanị ịtụnanya - ohere ụwa nke music na mkpịsị aka gị tipsThe adịchaghị ọrụ bụ a music n'anya nrọ-abịa trueThis na-otu nke kasị mma internet redio ngwa ọdịnala m na mgbe eji. A n'anya ngwa otu nke kasị mma music apps si there.Just iche e nwere ndị na-akparaghị ókè skips enweghị a na ndenye aha.
Music nhọrọ ikike
Ege gị ntị music n'ọbá akwụkwọ offline
Spotify Music bụ dakọtara na iPhone na iPad. Ya fim bụ 4.4 na-atụ aro na ọ na-họọrọ dị ka otu n'ime n'elu ngwa na ya udi.
Uru nke na-eji nke a ngwa-agụnye ya ike na-enyere gị aka ịchọpụta ọhụrụ music, na-ege ntị songs offline na tinye-free n'elu ikpo okwu. Otú ọ dị, ọ na-abịa na a price.
Ị nwere ike ibudata a na ngwa site na njikọ n'ebe a; https://itunes.apple.com/us/app/spotify-music/id324684580?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Olee otú na-ege ntị music gụgharia iji Spotify
Download ngwa site na njikọ nyere n'elu na wụnye ya ngwaọrụ gị. Ẹkedori ngwa, On Ihuenyo, họrọ playlist ị chọrọ na enweta na ya na-amalite nkwanye music.
Pandora bụ otu n'ime ewu ewu music gụgharia ngwa ọdịnala na US, Australia na New Zealand. Ọ dị ukwuu n'ihi na ịhazi music ị hụrụ n'anya. A sample nke ihe si ngwa si ọrụ ndị dị ka ndị; N'ihi ya, m na-eche na nke a bụ nke abụọ kasị mma redio ngwa si thereBest online redio ọrụ n'agbanyeghị mkpọsa ngwá ahịa na infomercials
Otu nke kasị mma ahaziri redio ụgbọ m nwetụrụla
Elu mma audio
Ole na ole interruptions
Ngwa bụ dakọtara na iPhone na iPad. Ya fim bụ 4.4 na-atụ aro na ọ na-họọrọ dị ka otu n'ime n'elu ngwa na ya udi.
Uru nke na iji ngwa a bụ ya free ụgwọ, ahaziri redio ụgbọ na listi ọkpụkpọ. Otú ọ dị, ọ nwere na ngwa-ịzụrụ.
Ị nwere ike ibudata ngwa n'ebe a; https://itunes.apple.com/us/app/pandora-radio/id284035177?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Olee otú na-ege ntị music gụgharia iji Pandora
Download ngwa site na njikọ nyere, wụnye na ẹkedori it.Open gị free accountSelect na playlist ma ọ bụ ike gị onwe gị na-amalite na-anụ ụtọ music.
iHeartRadio bụ na n'elu ruru ya mfe iji ọrụ interface, ọ e Itie site CNET dị ka "ihe kasị mma gụgharia redio ngwa". Na-agba akaebe, ebe a bụ ụfọdụ ọrụ na-ekwu;
M hụrụ n'anya karịa gị pụrụ ige ntị na n'ezie na redio ụgbọ si niile ná mba a bụ ihe kasị mma online redio ngwa m mgbe eji. E nwere ihe a oké mix na omenala ụgbọ.
Apple CarPlay-onwem ụgbọala nkwado
Commercial-free omenala music
Iyi na gị TV na Google Chromecast
Ngwa bụ dakọtara na iPhone na iPad. Ọ na-gosiri 3.9 na-atụ aro na ọ na-họọrọ ubé n'elu nkezi tụnyere ndị ọzọ yiri ngwa.
Ya uru na-agụnye ikike mepụtara omenala listi ọkpụkpọ na na na o nweghị mgbasa ozi. Otú ọ dị, gi agaghi ịkekọrịta music na ndị enyi na mmadụ netwọk.
Ị nwere ike ibudata ngwa n'ebe a; https://itunes.apple.com/us/app/iheartradio-stream-best-music/id290638154?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Olee otú na-ege ntị music gụgharia iji iHeartRadio
Download ngwa site na njikọ nyere, wụnye na ẹkedori ya. Na n'ụlọ ihuenyo, ị nwere ike họrọ ihe ọ bụla redio na-egwu music frpm na ndị ọzọ otú ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta gị playlist na ọkacha mmasị gị songs.
The ngwa-ejikọ gị ka ị na nke kasị mma redio, na a dịgasị iche iche nke ụgbọ ịhọrọ site na mgbe nile mmelite ntụrụndụ ozi ọma. Comments site na ọrụ ndị dị ka ndị;
Ọ na-nwetara na-kasị mma redio ngwa si there.Slacker kemgbe ndị kasị mma online Radio / playlist m nwere usedIt bụ dị ka iTunes maka online music na na ina artists.
Wide nso nke music ụgbọ
Dedicated nkwado na mmelite
Na-enye ruo ụbọchị n'ụwa nile ozi ọma na music
Ngwa bụ dakọtara na iPhone na iPad. Ya fim bụ 4.0-atụ aro na ọ bụ otu n'ime n'elu ngwa na ya udi.
Uru nke na iji ngwa a bụ na o nwere a free version na nwere niile dịgasị iche iche nke music ụgbọ. Otú ọ dị, free version nwere na mgbasa ozi na nwere ike na-interrupting.
Download ngwa n'ebe a; https://itunes.apple.com/us/app/slacker-radio/id298307011?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Olee otú na-ege ntị music gụgharia iji Slacker Radio
Download ngwa si nyere njikọ, wụnye na ẹkedori it.On n'ụlọ peeji, họrọ ụgbọ ma họrọ ọ bụla ojii na-amalite na-anụ ụtọ music. Ma ọ bụ, ị pụrụ ọbụna ike gị playlist.
Aha ya bụ ihe kasị mma ngwa na App Store na 2012 na nchịkọta akụkọ nhọrọ on Google play. Songza bụ ịrụ ụka adịghị otu nke kasị mma music gụgharia ngwa. Ebe a bụ ihe ụfọdụ ndị na ya ọrụ nwere ikwu;
Hụrụ n'anya na-concierge atụmatụ na m hụrụ n'anya na playlist.I achọpụtawo ka ọtụtụ ndị ọhụrụ artists m hụrụ n'anya ekele Songza.1 Ịhụnanya nke iche iche na ntọala ịchọta music maka ihe ọ bụla na ọnọdụ m na.
Ọ dịghị-ege ntị ịgba
Share on mmadụ netwọk.
Ọ bụ dakọtara na iOS na Android. Ọ na-gosiri 4.3 na-atụ aro na ọ na-họọrọ ke n'elu.
Uru nke na iji ngwa a na-agụnye curated listi ọkpụkpọ maka onye ọ bụla na ọnọdụ na ọnọdụ. Otú ọ dị, ọ bụ mgbe niile n'ọrụ na ndabere ka mgbe niile site na iji batrị.
Ị nwere ike ibudata ngwa n'ebe a; iOS - https://itunes.apple.com/us/app/songza/id453111583?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Olee otú na-ege ntị music gụgharia iji Songza
Download ngwa site na njikọ ndị nyere, wụnye na ngwaọrụ gị na ẹkedori ya. Na n'ụlọ peeji nke, ị ga-jụrụ na ọnọdụ nke ga-ahụ na-amalite na-akpọ yiri music.
Jango bụ otu n'ime ewu ewu free music gụgharia ngwa ọdịnala na ka ị na hazie redio ọrụ na-arụ ndị kasị mma music site artists ị hụrụ n'anya. Sample ahịa reviews ndị dị ka ndị;
Ya ndị kasị mma music gụgharia ngwa na m maara nke na bụ n'ezie FREEThis bụ otu nke kasị mma music redio apps si thereHaha a oké ngwa n'ihi na music Genre ụgbọ n'ozuzu nwere ezi music uto.
Free, na-akparaghị ókè na-ege ntị na desktọọpụ na mobile
Mepụta omenala na redio ụgbọ na artists ị hụrụ n'anya
Ezi-na-na-akụ gị ụgbọ site na-agbakwụnye ma ọ bụ machibido artists
Share ụgbọ okporo ígwè na facebook na enyi
Ngwa bụ dakọtara na Android. Ọ na-gosiri 3.8 nke bụ n'usoro ubé n'elu nkezi.
Advvantages nke na-eji nke a ngwa bụ na ị nwere ike họrọ si ala, ọkara na elu àgwà gụgharia nke bụ ezigbo maka capped internet ndokwa. Otú ọ dị, ọ bụ nanị maka Android 2.1 ma ọ bụ ọhụrụ na ọ dịghị akwụsị akpọ n'oge ekwentị oku mgbe iji ekwentị gị.
Ị nwere ike ibudata ngwa n'ebe a; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jangomobile.android
Olee otú na-ege ntị music gụgharia iji Jango
Download ngwa si nyere njikọ, wụnye na ẹkedori ya. On n'ụlọ peeji nke ị nwere ike họrọ ọdụ na ị chọrọ ige ntị, ma ọ bụ họrọ site genre.
Blinkbox bụ mfe ụzọ na-achọpụta ọhụrụ music ị ga-n'anya, n'ihi na free. Sample ọrụ comments ndị dị ka ndị;
Nnọọ otu nke kasị mma music ngwa ọdịnala na android ahịa. A dịgasị iche iche nke songs ma na-azọpụta gị ọkacha mmasị na gị onwe gị ọdụ: -. Ọmarịcha music ụgbọ na ọmarịcha music, na-arụ ọrụ kasị mma na Wi-Fi.
Stream na ibudata free apụta redio Stations.
Mee gị onwe gị raara onwe ya nye redio.
Share ụgbọ okporo ígwè na mmadụ netwọk.
The ngwa bụ dakọtara na Android ngwaọrụ. Ọ na-gosiri 4.4 na ya mere họọrọ dị ka otu n'ime n'elu music gụgharia ngwa.
Uru nke na-eji nke a ngwa-agụnye ikike ibudata na na ọ bụ n'ihi free. Otú ọ dị, o nwere Mgbasaozi nke nwere ike ịkwụsịtụ gị ntị.
Ị nwere ike ibudata ngwa n'ebe a; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.we7.player
Olee otú na-ege ntị music gụgharia iji Blinkbox
Download ngwa site na njikọ nyere. Wụnye na ẹkedori it.On n'ụlọ peeji, ị ga-nhọrọ, pịa inyocha ụgbọ iji họrọ ọ bụla na ị chọrọ igwu ma ọ bụ i nwere ike pịa search button ịchọ ọzọ ụfọdụ songs.
MOG bụ a top ngwa ruru ya obosara ohere ọtụtụ nde songs na ị pụrụ ọbụna na-ege ntị songs offline. Sample ihe si ọrụ ndị dị ka ndị;
M pụrụ ige ntị na ihe ọ bụla song m chọrọ awesomeLove elu àgwà 320 kbps bit ọnụego iyi na downloadsThis bụ ihe kasị mma music gụgharia ọrụ si n'ebe
Ịtụnanya ezi music aro ahaziri na-amasị gị
-Anọghị n'ịntanetị playback
Access 15 ọtụtụ nde songs
Nzi mmekọrịta n'etiti web na mobile
Ị nwere ike ibudata ngwa ebe a https://itunes.apple.com/us/app/mog/id372093286?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Olee otú na-ege ntị music gụgharia iji MOG
Wụnye ngwa na ẹkedori ya. Na n'ụlọ peeji, họrọ ọ bụla nhọrọ nke ga-eduga listi ọkpụkpọ ma ọ bụ i nwere ike chọọ n'ihi na ụfọdụ songs ị na-achọ na-ege ntị.
Mama Machine prides nke inwe ndị kasị ekwu banyere music na blọọgụ, gị n'akpa uwe. Ụfọdụ n'ime ihe banyere ngwa ndị dị ka ndị;
nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma music ngwa / blog mgbe createdIt bụ oké saịtị maka chọpụtara ọhụrụ music tinyere na egwu remixes.Great ụzọ ahụ ọhụrụ music na ike gị onwe gị playlist na ya.
The ngwa bụ dakọtara na iPhone na iPad. Ọ na-gosiri 4.3 na na-họọrọ dị ka otu n'ime n'elu ngwa ọdịnala na ya udi.
Uru nke na iji ngwa a bụ na ị na-achọpụta ọhụrụ na-ewu ewu songs mgbe niile. Otú ọ dị, ọ na-abịa a na-eri nke $3.99.
Ị nwere ike ibudata ngwa n'ebe a; https://itunes.apple.com/us/app/hype-machine/id414315986?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Olee otú na-ege ntị music gụgharia iji mama Machine
Wụnye na ẹkedori ngwa na gị deviceOn n'ụlọ peeji nke ị nwere ike ịhọrọ site nhọrọ na-agụnye, 'kacha ọhụrụ', 'Popular', 'Genres', na-ege ntị listi ọkpụkpọ, ma ọ bụ i nwere ike dị enweta na search igbe ịhọrọ bụla kpọmkwem playlist ị chọrọ.
TuneIn bụ nanị ezigbo redio, ebe i nwere ike na-achọpụta, na-eso na-ege ntị a dịgasị iche iche nke music, na n'elu 100 000 ezigbo redio ụgbọ. Ebe a bụ ihe ụfọdụ ndị na ndị ọrụ ha nwere ikwu;
Nke a bụ a 'ga-esi' ngwa n'ihi na redio ndị hụrụ. M na-ege music ogologo ụbọchị dum n'ebe nile si gburugburu ụwa. Nke a bụ ihe kasị egwu Podcast / music ọkpụkpọ m chọpụtara
Dịgasị iche iche nke ezigbo na redio ụgbọ
High ụda àgwà
Dịgasị iche iche nke Genres
The ngwa bụ dakọtara na iPhone na iPad. Ọ na-gosiri 4.3 na na-họọrọ dị ka otu n'ime n'elu ngwa n'ihi na music gụgharia.
Uru nke na-eji nke a ngwa na ya dịgasị iche iche nke ezigbo music ụgbọ na-agụnye gị obodo omume. Otú ọ dị, ya otu n'ime ndị kasị oké ọnụ music gụgharia ngwa ọdịnala na $9.99.
Ị nwere ike ibudata ngwa n'ebe a; https://itunes.apple.com/us/app/tunein-radio-pro/id319295332?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Olee otú na-ege ntị music gụgharia iji TuneIn Radio
Wụnye na ẹkedori ngwa On n'ụlọ peeji họrọ Obodo redio ma ọ bụ music na-amalite na-ege ntị.
> Resource> Music> 10 Best Free Music gụgharia égwu